Geomoments - Mmetụta na Ọnọdụ na otu ngwa - Geofumadas
Jenụwarị, 2021 Geospatial - GIS, Google Earth / Maps, innovations, Internet na Blogs, ọtụtụ
Gịnị bụ Geomoments?
Mgbanwe ụlọ ọrụ nke anọ mejupụtara anyị na nnukwu nkà na ụzụ na njikọta nke ngwaọrụ na ihe ngwọta iji nweta ohere dị omimi na nke na-enweghị nghọta maka onye bi na ya. Anyị maara na ngwaọrụ mkpanaka niile (ekwentị, mbadamba, ma ọ bụ smartwatch) nwere ike ịchekwa ọtụtụ ozi, dịka nkọwa ụlọ akụ, data metụtara ọnọdụ ahụ ike, na ọkachasị data ọnọdụ.
N'oge na-adịbeghị anya anyị nwetara ihe ịtụnanya nke mwepụta nke ngwa ọhụrụ nke jikọtara ọnọdụ mmetụta uche, gburugburu ebe obibi na ọnọdụ nke ihe omume. Geomoments bụ aha, e kere ya n’etiti 2020 n’etiti ọrịa na-efe efe, n’isiokwu a anyị ga-eme nyocha. Dabere na onye nrụpụta ahụ, ọ bụ netwọkụ mmekọrịta, nke ọ kọwara dịka "netwọkụ zuru ụwa ọnụ nke oge, ma ọ bụ ahụmịhe ... Nnukwu ụlọ nkwakọba ihe ebe anyị na-echekwa ma kesaa oge anyị, ahụmịhe anyị, ihe omume mere anyị n'otu ụbọchị na ebe. ”.
GeoMoMents bụ ngwa ngwakọ mepụtara na loníc, nke na-eji igwe ojii Google, Fírebase, maka nchekwa, izi ozi na nnabata. A na-echekwa ozi ahụ na Google Cloud Firestore, nchekwa data noSql. A na-echekwa faịlị foto ahụ na Nchekwa Google Cloud. Ejiri Firebase Messagíng maka izi ozi ozigbo.
Kedu ka Geomoments si arụ ọrụ?
Nke mbu, anyi gha egosiputa ihe eji eme ihe na otu igha esi amalite ichikota Geomoments gi. Mgbe nbudata ngwa si Jụọ ụlọ ahịa (Gam akporo), wụnye ya na ngwaọrụ mkpanaka ma mepee ya, ihe mbụ na-egosi bụ nkọwa zuru ezu banyere otu esi arụ ọrụ GeoMoMents. Maka ngwaọrụ iPhone, ngwa ahụ ga-adị n'etiti 2021. N'otu aka ahụ, ha gbakwunyere bọtịnụ iji banye na Google ngwa ngwa, na ọkwa gosipụtara na-ekwe ka ọnọdụ nke ngwaọrụ ahụ. Mgbe nke ahụ gasịrị, egosiri data nke akaụntụ GeoMoMents (GMM), ọ ga-ekwe omume ịgbakwunye "aha njirimara" ma ọ bụ aha otutu, a na-egosikwa ozi nke onye ọrụ ahụ tinyegoro na ngwa ahụ.
GeoMoMents bụ nchekwa nke oge, otu ebe, na ụbọchị akọwapụtara, mmetụta, ncheta iji chekwaa yana kesara ụwa.
Mgbe ahụ ị nwere ike ịnweta menu ndị isi, ebe ị ga-enwe ike ịnweta omume dị iche iche: ịmalite, GMM ọhụrụ, GMM m, map GMMs n'ịntanetị, Nyochaa (n'oge na-adịghị anya), egwuregwu ịntanetị (n'oge na-adịghị anya), hazie ihe ngosi, akaụntụ na enyemaka. Maka ugbu a enwere ọtụtụ n'ime ha na-adịghị adị, mana anyị na-anwale ndị anyị nwere ohere. N'ebe obibi enwere panel, ebe ị nwere ike itinye GMM ọhụrụ, lelee GMM, nyochaa map GMMs n'ịntanetị, ma jikwaa akaụntụ onye ọrụ. Itinye oge dị mfe, anyị na-emetụ nhọrọ "GMM ọhụrụ" ozugbo ozugbo ihuenyo ọhụụ ga-egosi na data anyị ga-agbakwunye.
Ọ dị ịtụnanya na ejiri mmetụta nke onye ọrụ jikwaa ya, enwere bọtịnụ "mmetụta" (1) ebe ị nwere ike ịhọrọ nke akọwapụtara nke ọma site na Emoji, yana ọnọdụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya (2) ebe enwere mmetụta ahụ (mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ezinụlọ, ndị enyi, ọrụ, ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ otu egwuregwu). Onwe m, echere m na m ga-agbakwunye gburugburu ebe obibi, mana dịka ndị a na-abụkarị ihe kachasị mkpa, ahụmịhe nke ọ bụla n'ime ha gụnyere.
Niile data na GeoMoMents bụ spatio-temporal. I nwere ike na-ele na ikwu na GeoMoMents na-nso na ohere na oge na gị onwe gị GeoMoMent.
Mgbe ahụ, ịhọrọ oke ike nke mmetụta ahụ n'ogo sitere na 0 ruo 10 (3), yana ọ bụrụ na ịchọrọ ịkesa oge a n'ihu ọha ma ọ bụ chekwaa ya na nzuzo na ngwa ahụ (4). Nkọwa (5) bụ ihe dị mkpa ma ọ bụrụ na ịchọrọ icheta kpọmkwem ihe mere ụbọchị ahụ, ihe dị ka akwụkwọ edetu. N'ikpeazụ, anyị nwere ike itinye foto nke ihe omume gosipụtara na Geomoment. Na njedebe, maapụ ahụ gosipụtara kpọmkwem ebe ị na-edekọ oge ahụ (6), ọ bụ ezie na mụ onwe m na-eche na ọ bụ nhọrọ nke enwere ike ịkwalite na mmelite n'ọdịnihu, ikekwe na-agbakwunye ohere ịmegharị ebe ịchọrọ ịdekọ oge ahụ ma ọ bụrụ na onye ahụ Ejikọtaghị ya na Wi-Fi ma ọ bụ data mkpanaka.
A pụkwara itinye foto nke oge ahụ na ndekọ ahụ (7). Mgbe ị metụrụ bọtịnụ nchekwa aka, ngwa ahụ na-egosi ozi "GMM kere nke ọma", ma ọ bụrụ na anyị achọpụta "My GMM" na nchịkọta nhọrọ, Geomoments niile anyị gbakwunyere ga-apụta na ọ ga-ebu ibu, na ụbọchị na oge okike. N'akụkụ a nke ngwa anyị nwere ike: ịlele ndekọ ahụ, mee ka ozi ahụ dị ọhụrụ ma ọ bụ hichapụ ndekọ ahụ.
Ihe ị kwesịrị ịma bụ na ịnweghị ike itinye ọtụtụ Geomoments na nkeji oge na-erughị awa isii, ngwa ahụ na-eme ka anyị mata na oge ezughi ezu, nke nwekwara ike iwere ya dị ụkọ - n'agbanyeghị na anyị ghọtara na ọ bụ ụdị mbụ nke ngwa-, ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ na-eme njem ma gaa ọtụtụ ebe na-erughị awa 6, ọ gaghị ekwe omume idekọ oge ahụ.
Ná ngwụsị nke ihe ndekọ, na isi akụkụ nke ngwa ahụ, nchịkọta nke Geomoments ndị e kere eke na-egosi. Dịka ọmụmaatụ, ozi egosiri bụ 1 GMM na ígwé ojii, 1 GMM mpaghara, data ndị ọzọ na-anọgide na 0 ruo mgbe agbakwunye ozi kwekọrọ. Ọ bụrụ na i jighị ngwa ahụ ogologo oge, ịnwere ike ime ka interface dị ọhụrụ na bọtịnụ melite. Warningdọ aka ná ntị ọzọ nke ngwa ahụ na-eme abụghị ịhapụ data nke akaụntụ Google nke ejiri mekọrịta ya, ebe ọ bụrụ na nke ahụ emee, ọ gaghị ekwe omume ịnweta data edebanyere na Geomoments.
Ọ bụ Fernando Zuriaga kere ya, nwa akwụkwọ Telecommunications Engineering nke bi na Valencia - Spain ugbu a. Nwere ike ịga na blog ya site na ịpị ebe a, ebe ha nwere ike izitere gị ozi gbasara nchegbu ma ọ bụ onyinye gbasara ngwa ahụ.
Previous Post«Previous Ubre - Ala na-arụ ọrụ ọkachamara
Next Post Lomalọma - Ndị ọkachamara na-ahụ maka ọrụ obodoNext »